KannuNaUm Zvinyorwa Zvewaini - Dhizaini magazini
China 28 Ndira 2021
Zvinyorwa Zvewaini Dhizaini yeKannuNaUm waini marabhu inozivikanwa neyakagadziriswa uye yakaderera maitiro, yakawanikwa nekutsvaga zviratidzo zvinogona kumiririra nhoroondo yavo. Iyo tunhu, tsika uye kudiwa kwevanyori vewaini veNyika Yehupenyu Hurefu hunotsigirwa muaya maviri akarongwa mavara. Chese chinhu chinosimudzirwa nemagadzirirwo emazana emazana mazambiringa akavhengwa ayo akaitwa nenzira yegoridhe yakadururwa mu 3D. Iyo iconografiki dhizaini inomiririra nhoroondo yewaini idzi uye pamwe navo nhoroondo yenyika kubva kwazvarwa, Ogliastra iyo Nyika yeCentenaries muSardinia.
Zita rechirongwa : KannuNaUm, Vagadziri zita : Giovanni Murgia, Izita remutengi : Cantina Ogliastra.
Ichi chinoshamisa dhizaini anokunda sirivheri dhizaini mufashoni, zvipfeko uye nguo dhizaini kukwikwidza.	Iwe unofanirwa kunyatso kuona iyo sirivhiripi-inohwina vagadziri 'dhizaini portfolio kuti uwane zvimwe zvakawanda zvitsva, zvitsva, zvepakutanga uye zvekugadzira fashoni, zvipfeko uye magadzirirwo ezvipfeko anoshanda.
HandiShred Pepa Shredder Chishanu 5 Kurume
Gamsei Jongwe Barha China 4 Kurume
Aix Arome Cafe Cafe Chitatu 3 Kurume
Kurume 2021 (93)
Kukadzi 2021 (84)
Ndira 2021 (93)
Zvita 2020 (93)
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Chishanu 5 Kurume
Dhizaina ngano yezuva China 4 Kurume
Dhizaini yezuva Chitatu 3 Kurume
Mugadziri wezuva Chipiri 2 Kurume
Dhizaini timu yezuva Muvhuro 1 Kurume
Zvinyorwa Zvewaini Giovanni Murgia KannuNaUm